DHIIGA BOO’AA HINHAFNU!! – – Beekan Guluma Erena
DHIIGA BOO’AA HINHAFNU!! –	Beekan Guluma Erena
Personal Category, Seenaa April 23, 2016April 23, 2016BEEKAN GULUMMAA IRRANAA, YAADA QEEQAA
375SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
DHIIGA BOO’AA HINHAFNU!!
Adduunyaa bu’aa ba’iin heddu itti baay’attu tana keessatti wanti haala salphaadhaan argamu tokkoyyuu hin jiru. Akkuma jiruu keessa gamachuufi milkiin hedduun jiru, rakkoon hamaan abdii hanga nama kuchisiisitutti dhiyaatus uummamuun isaa hin hafu. Kufaatii ilaalchisee namoota akaakuu lamaattu jira, tokkoffaan namoota rakkoo uumame tokko irra deddeebi’anii yaadun mataa of dhukkubsan, kan yeroo heddu waa’ema rakkoo isaanii qofa haasawuu jaallatan, rakkoon suni maalirraa akka dhufe, hammam akka isaan aarse, rakkoon kun uumamuu isaatin miidhaa isaan qaqqabe irra deddeebi’anii warroota yaadan yoo ta’an isaan lammataa ammo namoota waan uumame hunda salphisanii ilaalun waan dabreen mataa of dhukkubsurra, gaafii salphaa…. Rakkoon uumame kun akkamiin haala itti furamuu danda’urratti warra xiyyeeffataniidha.
Adaduma ati furmaata irratti xiyyeeffattuun yaadni furmaata adda addaa sii dhufaa deema. Namoonni ciccimoon adeemsa isaanii keessatti bakka fedhan gahuudhaaf wayta carraaqanitti wanti sun yoo tahuufii dhabe, kufnana isaanii akka dugdeebititti fudhatu. Dubdeebii kana akka ragaatitti fudhachuun carraaqqii fooyya’aa ta’een irra deddeebi’anii yaalii taasisu. Kunimmoo galma gahiinsa isaanii saffisiisa.
Sakkaallan guddaan nuufii wanta yaadnu tokko jidduu jiru karaa lamaan ilaalamuu danda’a. Inni tokko xiinsammuu (Psychological) yoo ta’u inni kan biraa immoo si’aa’inna (emotional) dha. Jarreen kunneen immoo waan nu keessa jiran malee waan nama biraa irraa eegnuu miti. Kanaafuu yoo gufuulee nu mudatan jabinaaf obsaan bira dabruudhaaf furtuun guddaan sammuudhuma keenya jechuudha. Akka Henry Ford jedhutti, Waan tokko nan dandaha yookin hin dandahu yoo jette gara lamaanittuu ati sirridha. Kana jechuun, Sammuun kee osoo gara hojiitti hin galin hin dandahu yoo jedhe durumayyuu karaa milkii ofitti cufte jechuudha. Akkasumas nan danda’a, wanta kana galmaan nan ga’as yoo jette wanti ati hin dandeennef hin jiraatu jechuudha.
Fakkeenyaaaf Gareen Lama Kubbaa miilaa taphachuuf yoo gara dirreettitti kan galan ta’e, ilaalchi gareelen lamaan ofiif qaban qabxii taphichaa murteessuu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf Taphattoonni Garee A, kan ofitti amanamummaa cimaa qaban, kan kaka’umsa qaban akkasumas kan Injifannoo akka gonfatan of amansiisan haa jennu, Faallaa kanaatin immoo gareen B, Ofitti amanamummaa kan hin qabne, kaka’umsa qabaatanis garee A ni injifanna jedhanii kan Amantaa hin qabne osoo ta’anii, tapha kana eennutu injifata jetttaniit yaadda? Maalif?
Deebin Isaa baay’ee salphaadha. Gareen A tapha kana injifachuuf carraa guddaa qaba. Maalif yoo jenne, osoodhuma gara taphichaatti hin seenin sammuu injifataadhaan gara dirreettitti seenan waan taheef. Kana qofas miti, tapha keessattis, sammuu isaanii keessa kan jiru injifatanii gammachuudhaan burraaquu waan taheef carraa argatan hundaa itti fayyadamuuf sammuun isaanii baay’ee qopheedha. Gama kaanin gareen lammataa garuu osoodhuma dandeettis kan qabaatu ta’ee sammuu isaa waan moo’uu hin dandeenyu jedhee of amansiisef carraan galii galchuu isaanii dhiphaadha.
Kufaatis tahee injifatamuun, of duraaf akka cimnee hojjannu mallattoo of eegannooti malee ofduraaf abdii akka hin qabne kan ittii adda baafannuu miti. Yeroo tokko tokko kufaatin hamaan yookin balaan hamaan nurra gahe tokko jiruu keenya ofduraa jijjiiruf akka eddo ka’umsaatitti nu tajaajiluu danda’a.
Waan dabrerraa baradhu malee itti hin dhiphatin. Ganni dabre waan dabreen dabree jira, kanaafuu ganna dhufuuf malee ganna dabreef hin yaaddayin, hirriba of hin dhooggin, jiruufi abdii ofduraa si eeggatu fuula dukkanaawadhaan hin ilaalin. Nama furmaatarratti xiyyeeffatu malee nama imimmaan gadadoo qıfa dhangalaasu hin ta’in.
Mee Seenaa asii gadii kana haa ilaalluu;
Barsiisaan tokko daree isaa isa tokkotti Bishaan Qaruuraa guutuu ta’e qabatee ol seenee barcumaa irra kaaye. Osoma barsiisuu jidduudhaan, qaruuraa kana bakka kaayee fuudhee, yeroo muraasaaf harkarra kaayee barattoota isaa akkana jechuun gaafate.
Barattoota koo:::) Bishaan Qaruuraa kana keessa jiru graama meeqa ta’a jettanii yaaddu?! Jedheen
Ijoollenis wal jalaa fuudhun, dabaree dabareedhaan Graama 50, Graama 100, Graama 125 jechuun deebisan…)))
Barsiisaanis, Dhugaa dubbachuudhaaf bishaan kun graama meeqa akka ta’e ani hin beeku, garuu bishaan kana akkuma harkarra kaayadhe kanaan daqiiqaa muraasaaf yoo ture maaltu uumama jettanii yaaddu ? jechuun gaafii biraa gaafate;
Barattoonnis homtuu hin uumamu Barsiisa jedhanii deebisaniif!
Itti aansanii barsiisaan yoo akkuma amma harkaa qabu kanatti sa’aatii tokkoof qabee dhaabadheen hoo ? jedhee gaafate.
Barattoota keessaa tokko, Barsiisaa, harki keessan isin dhukkubuun mala jedheen;
Tole barattoota koo, Yoo guyyaa guutuu akkamumatti qabadhee dhaabadheen hoo jedhanii gaafatan ?
Akkas taanan harki keessan baay’ee isin miidhama, isin hadooda, isin buqqa’uu dandaya, kanaafuu tarii miidhan harka keessanirra gahuun malu mana yaalaa akka deemtan isin dirqisiisuu dandaya jedhaniin:::)
Kana booda ijoollen hundinuu wal faana kolfan
Ammas barsiisan gaafii isaanii hin dhaabne, guyyaa guutuu qabee dhaabachuu kiyyaan ulfaatinni bishaan kanaa ni hir’ataa ? jedhanii gaafatan)
Barattoonnis, Lakki Barsiisa hin hir’atu jedhanii deebisaniif!
Erga kana ta’e maalif miidhamni harkaatifii dadhabiin suni hundi barbaachiseree jechuun barsiisaan gaafii isaanii itti aansanii gaafatan!
Ergasii barattoota keessaa tokko:::) Barsiisaa ‘ Qaruuraa Ofirraa Lafa Kaa’aa’ jedheen!
Ashoo Guddadhu~ Dhugaa jette ilma koo jedhaniin!
Ittı dabalanis ~ Ilmaan koo osoo hammuma fedhees rakkattanii, dararri guddaan isinirra ga’ees ta’u rakkoodhuma sana deeddeebistanii sammuu of hin haadochinaa. Kallattii xiyyeeffannaa keessanii gara furmaataatti deebisaa, yeroo san, osoo mataanis isin hin hadoodin galma barbaaddan ga’uu dandeechuu jedhee gorsa guddaa kenneef!
Eeyyen Lammiiwwan Koo:::)
Akka Saba keenyaatti ummanni Rakkoon hamaan irra gayeefi irra ga’aa jiru hin jiru jechuun ni danda’ama. Imimmaan keenya akka roobaa nurra jigu ammas hin caamne. Haa ta’u malee akka dhiiga boonye kanatti hin hafnu, abdii Rabbiitiin inuma milkoofna. Hamma danda’ameen hundi keenyaa rakkoolee bira dabarre qofarratti xiyyeeffachuu osoo hin ta’in furmaataaf eddoo guddaa laannee of dura osoo tarkaanfannee milkiin keenya ni saffisa jedheeti yaada✍
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa375SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← TIYYA ONNEEN…